Rikooradii cajiibka ahaa ee laga diiwaan geliyey kulankii barbaraha ku idlaaday ee Premier League kooxaha Liverpool v Chelsea – Gool FM
Rikooradii cajiibka ahaa ee laga diiwaan geliyey kulankii barbaraha ku idlaaday ee Premier League kooxaha Liverpool v Chelsea
(Liverpool) 12 Maajo 2016 – Kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa is mari waayey kulan ku tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxaana uu ku soo idlaaday barbaro 1-1.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Anfield ee kooxda Reds ayay Chelsea goolka la horreysay waxaana u dhaliyey 32’daqiiqo qeybtii hore Eden Hazard, sidaas ayaana lagu kala nastay Liverpool oo lagu hoggaaminayey 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay ayay Liverpool la timid goolka barbaraha waxaana uu ahaa mid soo daahay oo daqiiqadihii dheeriga ahaa ee ciyaarta uu u dhaliyey Christian Benteke, sidaas ayuuna gar isku mid ah 1-1 ugu soo idlaaday kulankii ka dhacay garoonka Anfield.
>- Lix ka mid ah 9 gool oo uu Christian Benteke u dhaliyey Liverpool Premier League, waxay yimaadeen isagoo bedel ku soo galay ama ka soo kacay kursiga keydka, waana in ka badan inta ay sameeyeen xiddigaha kale xilli ciyaareedkan horyaalka.
>- Laacibka reer Belgium ayaa ku lug lahaa afar gool shantii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray horyaalka Premier League, saddex gool waa uu dhaliyey mid kalena caawiye ayuu ka ahaa.
>- Eden Hazard ayaa dhaliyey afar gool, afartiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray Premier League, kaddib 29 kulan oo uu markaas ka hor qadsanaa tartankan.
>- Kooxda tababare Jurgen Klopp ayaa gool dhalinaysay 13-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League.
>- Reds hadda waxa ay unbeaten tahay oo aan laga adkaan siddeed kulan oo Premier League ay ku ciyaartay garoonkeeda Anfield, afar waa ay badisay halka afar kale ay barbaro gashay.
>- The Blues ayaa hal jeer kaliya shabaqeeda gool ka ilaashatay 12-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo la ciyaartay Liverpool.
>- Kooxda Chelsea ayaa gool dhalinaysay 10-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay la dheeshay Liverpool.
>- Goolkii soo daahay ee Benteke, waxa uu ka dhigan yahay in Chelsea ay guul gaari la’ dahay saddex kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay, iyadoo ka hoos ciyaaraysa macallin Guus Hiddink.
Liverpool oo Barcelona kula loolamaysa saxiixa Hatem Ben Arfa
Newcastle United oo u dhacday horyaalka heerka labaad iyo Sunderland oo xaqiijisay inay sii joogi doonto Premier League